Izinto endizithandayo nguJulie Andrews - Okunye
Izinto endizithandayo nguJulie Andrews
Isandi soMculo Wayengomnye weqela elidumileyo lokubhala lomculo u-Rodgers no-Hammerstein abasebenza kakhulu, kunye nentsebenziswano yabo yokugqibela. Eminye imisebenzi ebalulekileyo ngabo ibandakanya Oklahoma! kwaye Mna noKumkani . Kwi Isandi soMculo , URichard Rodgers ubhale umculo kwaye u-Oscar Hammerstein II wabhala amazwi engoma ethi 'Izinto Endizithandayo.'
Nangona yaqala ukuvela eqongeni kwimveliso yowe-1959, uninzi lwabantu luyayazi inguqulelo yefilimu eyakhutshwa ngo-1965 yaphumelela ii-Oscars ezintlanu. Ifilimu ibonisa umdlali wezomculo uJulie Andrews we UMary Poppins udumo kwindima yakhe njengomdlali ophambili kwezomculo, uMaria, ophethe abantwana bakaCaptain von Trapp.
Kwizinto 'endizithandayo,' uMaria uchaza zonke izinto ezimenza azive ebhetele xa ekhathazekile, 'Njengamathontsi emvula kwiiroses kunye nentshebe yamantshontsho, iiketile zobhedu eziqaqambileyo kunye nemittens efudumeleyo yoboya.' Nangona kunjalo, ayisiyiyo ingoma eyonwabisayo kwaye ibhalwe kwisitshixo esincinci, kwaye kuphela ekupheleni kwengoma, xa ecula 'ndicinga ngezinto ezimbalwa endizithandayo, emva koko andiziva ndimbi' Ngaba ukungqinelana okuyisiseko kubonisa oku kukhutshwa kweemvakalelo ezingalunganga ngotshintsho olukhulu lwentetho.
Le ngoma idume ngokubonakalayo kwindawo yefilimu xa abantwana baka-von Trapp abajongayo boyike kwaye baya egumbini lakhe ngexesha lesiphango, kwaye uyicula ukuze abathuthuzele. Olu tshintsho kwisimo sokuqala soBubanzi beengoma siye sahlala kwiindawo ezininzi zokuvelisa.
Izinto ezininzi ezizithandayo ezikhankanywe kule ngoma azibizi mali; Umzekelo, iRose kunye nobusika obumhlophe obumhlophe. Kumashumi eminyaka kamva, umbono 'wezinto ozithandayo' waba yinto yokuthanda izinto eziphathekayo, ngakumbi xa u-Oprah Winfrey wayiguqula yaba sisiganeko sonyaka sokukhanyisa iimveliso ezinje ngeDVD player kunye nejean yoyilo. 'Izinto ezithandwayo ngu-Oprah' zaba sisikhokelo sokuthenga seeholide, esathi emva koko sayamanisa ingoma nexesha leKrisimesi, sayityhalela kuluhlu lokudlala lweholide. Ngokukhankanywa kwasebusika kunye neentsimbi zesleigh, ayibhiyozeli kangako kunezinye iingoma zeKrisimesi ezingathethi ngokuthe ngqo ngeholide, kodwa kumaxesha anamhlanje kuye kwaba ngakumbi ngokuthenga into kunokwenza into okanye ukonwabela nje ubuhle bendawo okuyo.
Kwi-2018, uAriana Grande wayithatha le ngoma wayifaka kwicandelo lobunewunewu xa wayesebenzisa umculo kwingoma yakhe ethi '7 Rings,' apho adwelisa khona iidayimani phakathi kwezinto zakhe azithandayo kwaye ucula malunga nendlela imali enokuthenga ngayo ulonwabo:
Nabani na othe imali ayinakusombulula iingxaki zakho
Akufuneki ube nemali eyaneleyo yokusombulula 'em
Kwinkqubo kamabonwakude Iingoma ezili-100 ezibalaseleyo ezivela kwiiMculo , UJulie Andrews uthe ngale ngoma, 'Ndiyacinga, ngokobuqu' Izinto Endizithandayo 'yeyona ngoma ndandithanda ukuyicula. Amagama omculo ayemnandi kakhulu kwaye yayiyinto ekhuthazayo yonke into umntu awayeyicula wayenokubona imifanekiso yeephakeji zamaphepha emdaka, amathontsi emvula kwiiroses kunye nezinto ezinjalo. '
UHerb Alpert kunye neTijuana Brass barekhode iqweqwe elithandwayo lale ngoma, njengoBjörk, owayeyicula kumdlalo bhanyabhanya Umdanisi Ebumnyameni . Iimvumi ezininzi ze-jazz ziyirekhodile le ngoma, kubandakanya uDave Brubeck, uJohn Coltrane kunye noStanley Jordan. Inguqulelo kaColtrane yayisisiseko sezinto ezithile zomzimba kunye negitare kwi-albhamu yayo ye-Doors '' Khanyisa uMlilo wam. '
Kwimibhiyozo yomhla wokuzalwa kukaJulie Andrews wama-69, wenza 'Izinto Endizithandayo' eManhattan kwiRadio City Music Hall inzuzo yeAmerican Association of Retired Persons (AARP), kodwa wawaguqula kakhulu amazwi. Phakathi kwamazwi ahlaziyiweyo: 'IiCadillacs kunye neekati kunye nezinto zokuncedisa ukuva kunye neiglasi, iPolident kunye neFixodent kunye namazinyo obuxoki kwiiglasi. Iipemaker, iinqwelo zegalufa kunye neeveranda ezinokujinga. Nazi izinto ezimbalwa endizithandayo. '
Olunye uhlobo lwengoma oludumileyo lwenziwe yimvumi kunye nomqhubi weqela uBobby McFerrin, owaziwa ngengoma yakhe ka-1988 ethi 'Ungakhathazeki Yonwaba.' UMcFerrin wenza le ngoma eCopenhagen ngeendlela ezahlukeneyo zomculo, evusa abaphulaphuli ngohlobo olumangalisayo lobuchwephesha bezwi kunye nokuphuculwa okunokuvakaliswa okuninzi. Inkqubo ye- ividiyo yale ntsebenzo yangena kwintsholongwane kwiYouTube.
Igama lale ngoma ikwangumxholo we-jazz saxophonist yecwecwe lesixhenxe likaJohn Coltrane, Izinto endizithandayo , ekhutshwe ngo-1961. Eli cwecwe alinayo imigangatho yejezi kodwa ezintlanu zaphinda zavuselelwa ziingoma ezithandwayo ngabantu abanjengoGershwin noPorter, kubandakanya nengoma yeshumi elinesithathu yomculo we 'Izinto Endizithandayo.' UColtrane uthe 'kuya kufuneka ubuyele kwizinto zakudala kwaye uzibone ngokukhanya okutsha.' Ngoguqulelo lukaColtrane lwe-bebop, le ngoma yaqhawulwa umtshato kwiingcambu zayo yaza yaguqulwa yenziwa into echazwe njenge 'hypnotic, Eastern dervish dance.' La magqabantshintshi abhekisa kumdla kaColtrane nomculo waseIndiya ophefumlelwe ngumhlobo wakhe, uRavi Shankar, owamazisa kwinqanaba le-Indian raga uColtrane awayeyisebenzisa yedwa kule ngoma.
UFebe (Lisa Kudrow) ucofa iingoma zale ngoma kwisiqendu se Abahlobo (Ixesha loku-1- 'Lowo xa uMonica efumana umntu omtsha'):
I-Bluebells kunye ne-slelendells
kunye nento eneemittens
la la la la la into enentambo ....
iyahlekisa indlela esingasathethi ngayo ngeengoma
yintoni zombie yi-cranberries malunga nayo
amazwi opps ndiyenzile kwakhona